Sir Alex Ferguson oo la ogaaday inuusan la dhacsanayn qaabka Mourinho uu u wado kooxda – Gool FM
Sir Alex Ferguson oo la ogaaday inuusan la dhacsanayn qaabka Mourinho uu u wado kooxda
Liibaan Fantastic December 27, 2017
(Manchester) 27 Dis 2017 Tababarihii hore ee Manchester United ayaa la ogaaday inuusan la dhacsanayn qaabka tababare Jose Mourinho uu kooxda u wado xiliciyaareed kaan.
Laacibkii hore ee Manchester United Dwight Yorke ayaa sheegay inuu la hadlay Sir Alex Ferguson isla markaana uu ka ogaaday inuusan la dhacsanayn qaabka kooxdu ay tahay xiliciyaareed kaan.
Dwight Yorke ayaa cadeeyay in dhamaan lawada filayay in Man United ay xiliciyaareed kaan u tartami doonto horyaalka, balse laga xumaaday in kala barka xiliciyaareedka uu tababaruhu dhaho ma nihin koox wayn.
“Sir Alex lama dhacsana sida ay yihiin wax yaabaha qaar ee uu arkayo xiliciyaareed kaan, waa waajib inaan sidaas iraahdo” ayuu yiri Dwight Yorke oo isbuucii hore la sheegaystay Ferguson.
“Ma jiro wax niyad jabinaya Sir Alex Ferguson, laakiin waxaan rumaysanahay inuu ku faraxsanyahay maanta inuusan ku jirin kubadda cagta oo banaanka uun uu ka daawanayo”.
“Bilowgii xiliciyaareedka waxaan filaynay in United ay u tartami doonto horyaalka, rajo fiican ayaa laga filayay tababaraha iyo ciyaartoyda, laakiin in tababaruhu uu soo baxo kala barka xiliciyaareedka isla markaana uu yiraahdo ma nihin koox wayn, ma ahan wax aan fahmi karo”.
Santiago Bernabeu waa garoonka Barcelona ay ugu jeceshahay La Liga sanadihii u danbeeyay (Aqri Xogtaan)
Afar sano ka hor, Neymar oo ku sigtay inuu socodka gabo (Sir la qarinayay muddo dheer)